डेङ्गु राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन? कति मान्छे मरेपछि यसले महामारीको रुप लिन्छ? - हिमाल दैनिक
डेङ्गु राष्ट्रिय महामारी हो कि होइन? कति मान्छे मरेपछि यसले महामारीको रुप लिन्छ?
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १६:५१
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्का विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सरकारलाई सचेत गराए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल वलीले तीन तहका सरकारले आपसमा सहकार्य गरी डेङ्गु रोगको नियन्त्रणमा तत्परता देखाउन ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थिति भयावह भएको उल्लेख भयो । उनले जनचेतना फैलाउन र भविष्यमा हुन नदिन पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराईन ।
सांसद रामप्रीत पासवानले तराई मधेशका सुकुम्वासीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले तराई मधेशमा सुकुम्वासीका नाममा पटक पटक जग्गा वितरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म वास्तविक सुकुम्वासी लाभान्वित हुन नसकेको बताए । तराई मधेशमा सुकम्वासीका नाममा गैरमधेशीलाई भूमि वितरण गरिएको आरोप लगाउँदै उनले भने , “तराईका सुकम्वासीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।”
सांसद वीना पोखरेलले दशैँमा शान्तिसुरक्षालगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन । उनले टिकटमा हुने अनियमितता रोक्न, उचित टिकट दर कायम गर्न, सहुलियत पसलको व्यवस्था गर्न, उपभोग्य वस्तुको मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन ।
Prevपछिल्लोदुई बालिका बेपत्ता
अघिल्लोवैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्कालै दिने कि नदिने ?Next